Huawei P8 Lite သည်ယူရို ၂၅၀ အောက်သာကျသင့်မည် Androidsis
Aprilပြီလလယ်တွင်တရုတ်ကုမ္ပဏီ Huawei သည်၎င်း၏ဆိပ်ကမ်းအသစ်များကို London ၌လူ့အဖွဲ့အစည်းသို့တင်ပြခဲ့သည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏မြို့တော်တွင်တင်ဆက်ခဲ့သောဆိပ်ကမ်းတစ်ခုမှာ Huawei P8 ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Shenzhen ရှိအခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူများထံမှထိပ်တန်းအဆင့်ရှိစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် terminal တွင် 6,8″ မျက်နှာပြင်ပါသည့် Max ဗားရှင်းနှင့်အတူပါ ၀ င်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းကို Phablet ထက်တက်ဘလက်နှင့်ပိုမိုဆင်တူသည်။
အဖြစ်အပျက်ပြီးဆုံးသွားသောအခါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်လက္ခဏာအချို့ပါသောဗားရှင်းကိုလည်းအသံတိတ်တင်ဆက်ခဲ့သည်။ အရှေ့ Huawei က P8 Lite ကို ဒီကားဟာယူရို ၂၅၀ ထက်မကတဲ့အခြေခံကျတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ဆိပ်ကမ်းကိုအပြိုင်အဆိုင်ပြိုင်နိုင်လိမ့်မယ်။ ဒီသေးငယ်တဲ့ P250 ဗားရှင်းကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သောဂျာမန်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြောင့်စျေးနှုန်းပေါက်ကြားခဲ့တာပါ။
ဒီစာမျက်နှာအတွင်းမှာငါတို့မသိသေးသောထူးဆန်းသောသဲလွန်စကိုတွေ့နိုင်သည်။ ဤသဲလွန်စတစ်ခုမှာမတူညီသောအရောင်နှစ်မျိုးဖြစ်သည့်အနက်နှင့်အဖြူရောင်ရှိသည်။ နှစ် ဦး စလုံးတစ် ဦး ရပါလိမ့်မယ် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင် နှင့်မြင့်မားသော resolution resolution (1280 x 768 pixel) အမည်ရှိစီးပွားဖြစ်ပရိုဆက်ဆာအောက်မှာအမည်ရှိ ရှစ် core ကို HiSilicon Kirin 620 နာရီအမြန်နှုန်း ၁.၂ GHz နှုန်းဖြင့် 64-bit ဗိသုကာလည်းပါဝင်သည်2GB RAM မှတ်ဉာဏ်သိုလှောင်မှုပမာဏ 16 GB ရှိသည့် microSD slot ကြောင့် 128 GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်။ အခြားအရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်မရာ ၂ ခုတပ်ဆင်ပုံ၊ optical stabilizer မပါဘဲ ၁၃ MP အဓိကကင်မရာနှင့်2Mega-pixel selfies ရိုက်ကူးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောကင်မရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ 2200 mAh ဘက်ထရီ, Android 5.0.2 Lollipop နှင့် 4G ဆက်သွယ်မှုများရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း terminal တွင်ကောင်းမွန်သောသတ်မှတ်ချက်များရှိပြီးသုံးစွဲသူများစွာသည် P8 ၏ Lite ဗားရှင်းတွင်အလောင်းအစားပြုလုပ်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာရှိသည်။ ဂျာမန်စာမျက်နှာကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်လာမယ့်ပုံကိုတွေ့ရမယ် Huawei P15 Lite ကိုအများပြည်သူအားဖြန့်ချိမည့်နေ့ကိုတရုတ်ထုတ်လုပ်သူကသတ်မှတ်သည့်နေ့တွင်မေ ၁၅ ရက်.
ထို့ကြောင့်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူသည်ကွဲပြားခြားနားသောကိရိယာ ၃ မျိုးကိုအမည်တူအောက်တွင်အိတ်ကပ်အမျိုးအစားအားလုံးအတွက်ထုတ်လွှတ်သည်။ စက်ကြီးကြီးတစ်ခုလိုချင်သူများသည် Huawei P8 Max ကိုသွားနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်ကြီးကြီးမလိုချင်သူများသည်ပုံမှန် P8 ကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူသည်အလယ်အလတ်စမတ်ဖုန်းရှိလိုပါက Lite version ကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ Huawei terminal အသစ်၏အားသာချက်များနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်မှတ်ချက်ပေးရန်ဤကိရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့လက်တွင်ရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ တဖန်သင်တို့က, သင် P8 Lite ကိုဘယ်လိုထင်သလဲ ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Huawei P8 Lite ကိုယူရို ၂၅၀ အောက်ကျသင့်မှာဖြစ်တယ်